Welcome to the 9th Anniversary of Arakan Army Day on 10 April 2018 – ULA
Posted: April 6, 2018/Under: News/By: ULA
ပုံမှန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက်၏မွီးနိသည် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နန့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အလွန်ဆုံး သူ့မိသားစု၊ သူ့ဆွီမျိုး၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူ့ကိုသိသောသူများနန့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစပြုသောနိ၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောနိများသည် ထိုအဖွဲ့အစည်း နန့်သက်ဆိုင်သူများ၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းကိုဝိုင်းရံပံ့ပိုးကူညီသောသူများ အားလုံးနန့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
၄င်းအထဲတွင်အမျိုးသားရီးဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီး (ဝါ) ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရီး နန့် ရခိုင်လူထုတစ်ရပ်လုံးအားကာကွယ်ပီးနိုင်ရန်အတွက်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ “ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိ”သည် ရန်သူ့သြဇာခံတစ်ချို့၊ ရန်သူ့အလိုတော်ရိတစ်ချို့၊ ရခိုင်လူမျိုးများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ဟိနီသူများ၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အားဆန့်ကျင်သူတစ်ချို့မှလွဲ၍ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးနန့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ULA/AA နန့်သက်ဆိုင်သူ၊ အားပီးဝိုင်းရံထောက်ခံသူများသည် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိရောက်တိုင်း သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် သူရို့ရောက်ဟိနီကတ်သောနီရာများတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိအား အလျဉ်းသင့် ကျင်းပကတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ဧပြီလ (၁၀) ရက်နိတွင်ကျရောက်မည့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (၉) နှစ်မြောက်နိသည် ရက္ခိုင်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (United League of Arakan-ULA)/ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (Arakan Army-AA) ၏လုပ်ရပ်များနန့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူများ၊ ULA/AA စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကတည်းကပင် ဂနိအချိန်အထိ အမျိုးသားရီးအသိတရား၊ အမျိုးသားရီးတာဝန်ဖြင့် တစိုက်မတ်မတ်ဝိုင်းရံပီးကတ်သူများ၊ ရက္ခိတလမ်းစဉ်ကို ခြွင်းချက်မဟိယုံကြည်သူများ၊ ULA/AA နန့်ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူလေးစားတန်ဖိုးထားကတ်သော ရက်ထူးတစ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးလှုပ်ယှားမှုလမ်းခရီးထဲတွင် ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်သော အမျိုးသားတော်လှန်ရီးလှုပ်ယှားမှုများကို အချိန်နန့်တပြေးညီ၊ အခါအခွင့်နန့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရခိုင့် အနာဂတ်၊ ရခိုင်မျိုးဆက်များ၏အနာဂတ်ခရီးလမ်းသစ်ကိုဖောက်ရာတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ အောင်ပွဲများကသာ အဆုံးအဖြတ်ပီးပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးနန့် ရခိုင်အမျိုးသားအောင်ပွဲအတွက် ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးတွင်တာဝန်ဟိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင်း၊ပြည်ပနန့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ရောက်ဟိနီကတ်သော ရခိုင်လူမျိုး( ရခိုင်သည်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်) များအနီနန့် သက်ဆိုင်သော အမျိုးသားရီးနိထူးနိမြတ်များထဲမှ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိကို မိမိရောက်ဟိသော နီရာမှနီ၍ သဟဇာတဖြစ်စီသောနာမည်တစ်ခု၊ အာပတ်လွတ်စီသောနာမည်တစ်ခု၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိ၏ ရည်ရွယ်ချက်နန့်အနှစ်သာရမပျက်စီသောအမည်တစ်ခုဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆင်နွှဲယင်း (၉) နှစ်မြောက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိကိုကြိုဆိုကတ်ပါမည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိ ကျင်းပရီးနန့် ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် အမျိုးသားရီးအသိနန့်ထည့်ဝင်ကတ်သော တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ချစ်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ဟိပါကြောင်းနန့် အမျိုးသား ရန်ပုံငွီများကို ULA/AA စတင်တည်ထောင်သည့်အချိန်မှ ဂနိအချိန်အထိ မပျက်မကွက်ထည့်ဝင်ပီးကတ်သောသူများအားလုံးကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ဟိပါသည်။
ဧပြီလ (၁၀)ရက်နိတွင် ကျရောက်မည့် (၉)နှစ်မြောက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နိအား ကြိုဆိုပါသည်။
10 responses to “Welcome to the 9th Anniversary of Arakan Army Day on 10 April 2018”
May Yu Alinn says:
Khaing lunn says:
ရကိုင့်လူထူးရင်ထဲက ရကိုင့်တပ်မတော် AAထာဝရ အောင်မြင်ပါဇီ
Khin mart min says:
I have fallen. In to this endless pick from. Wrath. I can never ratting
Mr soe says:
We love AA/ULA
Than Twan says:
Khin Moy Lin says:
Xein Thye says:
U KHINE REY LINN says:
Twan Mronq says:
Be happy with the best success. Unity, ability and strategy are important to be secured the rules of law in Arakan, that the Arakanese are hoping for them to become sooner when the conquer is achieved by the Arakan Army.